What is Lhochhar | Nepal Tamang Society, Japan नेपाल तामाङ समाज जापान
गृहWhat is Lhochhar
हाम्रो नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि संस्कृतिमा धनी छ । हामी गर्वसँग भन्नसक्छौं हामीसँग सयौं जात/जाति, सयौं भाषाभाषी, त्यत्तिकै संख्यामा संस्कृतिहरू छन् । हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकेको महान् देश संसारमा विरलै पाइन्छ । तर विगतको २४० वर्षसम्म हिन्दु खस कथित उच्चजात सामन्ती राजतन्त्रले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधतालाई विकासको बाधक ठान्यो । “हिन्दुधर्म, हिन्दुराजा, खसभाषा र हिन्दु संस्कृति”को संरक्षण र विकासको लागि नेपालका सम्पूर्ण रैथाने आदिवासी जाति, जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यतालाई मान्यता नदिएको मात्र होइन, हिन्दु मूल्य र मान्यतामा सबैलाई विलय गराउने दमनकारी बाटो अपनायो । यो अवधि नेपालको मौलिक रैथाने आदिवासी संस्कृतिहरूका लागी संकटकाल थियोेे । यसलाई सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भन्नसकिन्छ । अहिले यस्तो एकल जातीय सांस्कृतिक नीतिद्वारा क्षतविक्षत भएका सबै सांस्कृतिक सभ्यताले पहिचान, प्रतिष्ठा र मान्यता खोज्नथालेका छन् । सबै आफ्नो सामुदायिक चाडपर्वलाई राजकीय मान्यता दिलाउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । स्मरणीय छ कि यस सम्बन्धमा यही २०६५ माघ १० गते तामाङ जातिको ९७ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा ल्होछारको लागि ५ दिनकेा सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
चीन -मुख्य भाग), मंगोलिया, जापान, कोरिया, हङकङ, भियतनाम, लाओस्, थाइल्यान्ड, ताइवान, मलेसिया, सिङ्गापुर, भुटान, लदाख आदि देश तथा ठाउँहरुमा प्रत्येक वर्ष माघ शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन ल्होछार -नयाँ वर्ष) मनाउने गर्दछन् । चीनको तिब्बत स्वायत्त प्रदेशमा पनि ल्होछार मनाइन्छ तर त्यो माघशुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन नभई त्यसको एक महिनापछि फागुन शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन मनाउँछन् । यसो हुनुमा तिब्बतमा यस्को ऐतिहासिक कारण रहेको छ । पाँचौं दलाई लामाको ज्योतिष शास्त्र “सेतो-कालो प्रश्नोत्तर” ग्रन्थ अनुसार सन् १२२२ तदनुसार तिब्बती सम्बत् “रब्ज्यूङको अग्नी सुँगुर वर्ष”मा मंगोल बादशाह चेङगिज खाँले तिब्बतको शिहुँ प्रान्तका राजा मिञागको शासनमाथि कब्जा गरे । त्यसको खुशियालीको उपलक्ष्यमा साविकको ल्होछारभन्दा एक महिनापछि तिब्बतमा ल्होछार मनाउन थालियो । यो ल्होछार राजाले चलाएको हुँदा यसलाई ग्याल्बो -राजा) ल्होछार पनि भनिन्छ । यो मंगोलको बादशाहको हुकुमबाट मनाउन थालिएको हुँदा तिब्बती पात्रोको पहिलो महिनाको नाम होर्दाद्ङ्पो -होर-मंगोल र दावा-महिना) मंगोल पहिलो महिना भनिन्छ । यही लोसारलाई शेर्पाहरूले मनाउँदै आएका छन् ।
ल्हो चिन्हहरू, पाँच खाम -धातु)हरू -धातु, पानी, काठ, आगो, माटो)सँग जोडिएको हुन्छन् । यी खामहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । धातु पगाले तरल -पानी) बन्दछ । पानी परे बोटबिरूवा सप्रन्छ र काठ बन्दछ । काठको घर्षणबाट आगो निस्कन्छ । आगोबाट खरानी र माटो बन्दछ र माटो -पृथ्वी)बाट धातु निक्लिन्छ । यी खामहरूलाई सक्रिय तथा निष्त्रिmय वा भाले तथा पाथी, सेतो तथा कालो, दिन तथा रातमा विभाजन गर्न सकिन्छ । चिनियाहरू यसलाई यीन तथा याङ भन्दछ्न । ल्होले ६० वर्षे एक चक्र पूरा गर्दा “ल्हो” र “खाम” पुनः दोहोरिन्छ । ६० वर्षे दुई चक्र पूरा गर्दा “ल्हो”, “खाम” र “यीन/याङ” पनि दोहोरिन्छ । यो प्रणालीमा अशिक्षित मानिसले पनि बाह्रवर्षे चक्र र साठीवर्षे चक्रका आधारमा सजिलै आफ्नो उमेर गन्न सक्छन् ।
निश्चित रूपमा, ल्होछार ल्होको गणनाका लागि मात्र होइन । यो सांस्कृतिक परम्परा थियो र हेा । त्यति मात्र होइन, ल्हो परम्परा ज्योतिषशास्त्रसँग अन्योन्याश्रति रूपमा जोडिएको छ । यो आयुर्वेद अर्थात् परम्परागत औषधिविज्ञान र प्रणालीसँग जोडिएको छ । यस्को सामाजिक र आध्यात्मिक महत्व पनि छ । ल्होछारको अघिल्लो दिन ल्होछार प्रेमीहरू १२ जीवजन्तुको ल्हो बनाई नराम्रो ग्रहदशा हटाउन र सुखको दिनलाई स्वागत गर्न मनाउने गर्दछन् । ल्होछारको दिन प्राणीमात्रको मुक्ति र सुखको लागि घरघर, गुम्बा, सार्वजनिक स्थलमा प्रार्थना गर्दै धर्जु -धार्मिक झण्डा) फहराउँछन् । आफूभन्दा ठूलाको आशीर्वाद लिनु तथा शुभकामना दिनु १५ दिनसम्म आफन्तकहाँ जाने चलन छ । विदेश गएकाहरु घर र्फकन्छन् । यो हिन्दुहरूले दशैं मनाएजस्तै तामाङहरुका लागि ठूलो चाड हो । यही ल्होछारको दिनबाट वसन्त ऋतु सुरू हुनेहुँदा कृषकहरूका लागि पनि यसको आफ्नै महत्व छ । प्रकृतिमा पालुवा फेरिने मात्र होइन पशुपक्षीमा प्रजनन सुरू हुन्छ र सृष्टिको प्रक्रिया थामिन्छ । अनि कृषकहरु खेतीपाती सुरु गर्दछन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण यो तामाङजस्तो जातिको लागि राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो ।
ल्होछार मान्ने समुदायहरूको आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सरकारको पालामा माघ शुक्लपक्ष प्रतिपदा दिनलाई ल्होछार पर्व घोषणा गरी ल्होछार मान्ने समुदायलाई सरकारी बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । यो दिन हाम्रो लागि एकातिर ज्यादै खुशीको दिन थियो किन भने यो दिन नेपालमा सर्वप्रथम गैरहिन्दु सांस्कृतिक पर्वले राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । अर्कोतिर दुःख लागेको थियो ’cause पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि ल्होछारको राष्ट्रिय पर्वको मान्यताले हिन्दु चाडबाड र पर्वको बराबर हैसियत प्राप्त गरेको थिएन । तै पनि हामीमाथि सांस्कृतिक विभेद कायमै रहृयो । हाम्रो माग थियो – ५ दिनको राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदा । २०४७ सालको संविधानले निरंकुश पञ्चायतीव्यवस्थाको “हिन्दुराज्य” र “हिन्दुसंस्कृति”को नीतिलाई निरन्तरता दियो । त्यसैले राज्यले हिन्दु पर्वहरुलाई पाँच दिनदेखि १५ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिइआएको छ । यो स्थितिबाट के बुझ्यौं भने हिन्दुराज्यसत्ता नै हाम्रो जातीय भेदभाव, राजनीतिक दमन र सत्ताबाट बहिष्करणको मूल जड हो । जबसम्म नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुँदैन, हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुँदैनौं । नेपाल राज्यले गैरहिन्दुहरूको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्न छोड्ने छैन । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता आदिवासी जनजाति र दलितहरूको प्रमुख माग बन्यो । २०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षराज्य घोषणा गरेको छ तर अझै पनि गाईलाई “राष्ट्रिय जनावर”को मान्यता कायमै छ । गत वर्ष सरकारले ल्होछारका दिनलाई राष्ट्रियस्तरमा “सार्वजनिक बिदा” दिने निर्णय गर्‍यो तर हिन्दुपर्वमा पाँच दिनदेखि १५ दिनसम्म बिदा दिने तर जनजातिको पर्वमा एकदिन मात्र बिदा दिने विभेद भने कायमै छ । धर्मनिरपेक्षताको योभन्दा ठूलो उपहास अरु के हुनसक्छ ?
भर्खरै सरकारले “नेपाल संवत्”लाई पनि “राष्ट्रिय संवत्”को मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालमा विक्रम संवत् चलिआएकै छ । यसबाहेक किरात संवत्, तामाङ -मञ्जुश्री) संवत्, तिब्बती संवत्, बुद्ध संवत् पनि समुदायगत रूपमा मान्ने प्रचलन छ । राजकीय मान्यता नभए पनि गेगोरिय संवत् पनि चलनचल्तीमा रहेको छ । के यी सबै संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिएर प्रयोगमा ल्याउन सम्भव छ ? के विक्रम संवत्लाई हटाउनै पर्दछ ? यो प्रश्नको हल वास्तवमा सांस्कृतिक समानताको सिद्धान्तअनुसार गरिनुपर्दछ । सबै संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता दिन सकिन्छ र दिनुपर्दछ । अब नेपाल संघीय राज्यमा परिणत हुनेहुँदा गेग्रोरियन पात्रो -इस्वी संवत्) लाई केन्द्रीय सरकारले र सम्बन्धित प्रदेशले आआफनो संवत् चलाउने हो कि ? सैद्धान्तिक रूपमा समान मान्यता र व्यवहारमा स्थितिअनुसारको प्रयोगको नीति उपयोगी हुनसक्तछ । छलफल चलाउनु जरुरी छ ।